ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သွားတဲ့နေရာတိုင်းကို လိုက်ပီး နှောက်ယှက်ဆန္ဒပြနေသော ဝူကာအူတင် ခေါင်းဆောင်တဲ့ ရိုဟင်လိမ်အဖွဲ့နဲ့ ပတ်သတ်ပီး အမေရိကားရောက် ဗမာများအနေနဲ့ ကိုယ့်ဘက်က ဘယ်လိုသော ကိုယ်ထိလက်ရောက်အမှားမျိုးကိုမှ မလုပ်မိအောင် နေကြပါ..ကြက်ဥ၊ ဘဲဥ ၊ ခရမ်းချဉ်သီးတွေနဲ့ ပေါက်တာမျိုးလဲ မလုပ်မိပါစေနဲ့...
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ ဘယ်လိုအကြမ်းဖက်မှုမျိုးကိုမှ အားမပေးတဲ့ နိုင်ငံရေး ခေါင်းဆောင်တယောက်ပါ..ဒါ့ကြောင့် ကိုယ်တ
ိုင်က အဲ့ဒီခေါင်းဆောင်မဖြစ်နေရင်တော့ နောက်လိုက်ကောင်းတော့ ဖြစ်အောင် ကြိုးစားပြီး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ အကြမ်းမဖက်သော နည်းလမ်းကို လိုက်နာ စောင့်ထိန်းပါ...
- သင့်ရဲ့ဒေါသကြောင့် ဗမာပြည်သိက္ခာမကျပါစေနဲ့...
- သင့်ရဲ့ မစောင့်ထိန်းမှုကြောင့် သူများအမှား ကိုယ့်အမှားဖြစ်ပီး ဗမာနိုင်ငံရဲ့ ခေါင်းပေါ် ရိုဟင်ဂျာ ချီးတက်ပါသွားတာ ခံရတာမျိုးမဖြစ်ပါစေနဲ့...
- - သင့်ကြောင့် ဗမာနိုင်ငံကို ကိုယ်စားပြုထားသော မြင့်မြတ်တဲ့ ခေါင်းဆောင်တယောက်ရဲ့ အသရည် မညှိုးနွမ်းပါစေနဲ့..
(ထပ်ရေးလိုက်ပီ..ရှယ်တဲ့သူတွေ ပုံနဲ့ စာနဲ့တွဲမိသွားအောင် - ပုံကတော့ ယခု လက်ရှိဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို လိုက်နှောက်ယှက်နေတဲ့ပုံဟုတ်ချင်မှ ဟုတ်မယ်..ဒါပေမဲ့ သူတို့လိုက်နှောက်ယှက်နေတာကတော့လက်ရှိမှာလဲ မြင်တွေ့နေရတာပဲ...ဒါ့ကြောင့် ဝူကာအူတင်ကို မြင်ဖူးအောင် တင်ပေးတာ..)
သိုး ကလေး FB.
ပေးပို့တင်ပြသူ အာလူးလေး at 1:37 AM Email This BlogThis! Share to Twitter Share to Facebook